स्वास्थ्य बीमासम्वन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषदद्धारा पारित | | Nepali Health
स्वास्थ्य बीमासम्वन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषदद्धारा पारित
२०७३ चैत २९ गते २१:४२ मा प्रकाशित
काठमाडौँ, २९ चैत । स्वास्थ्य बीमा सम्वन्धी ऐनले अव छिटै अन्तिम रुप लिने अवस्था देखिएको छ । स्वास्थ्य बीमा सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७३ आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेपछि ऐनले छिटै अन्तिम रुप लिने अवस्था देखिएको हो ।
आजको बैठकले विधेयक थप छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ । सो समितिले स्विकृत गरेसंगै विधियेक अन्तिम छलफलका लागि व्यवस्थापिका संसदमा पुग्नेछ ।
स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले आजको निर्णय पछि बीमा ऐनले छिटै अन्तिम रुप पाउने दावी गरे । उनले भने, ‘आजको मन्त्रिपरिषद बैठकले विधायन समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ । अव सम्भवत अर्को हप्ता यो विधेयक संसदमा पुगिसक्छ । त्यहि हिसावले आज प्रधानमन्त्री ज्यूले निर्देशन समेत दिईसक्नु भएको छ । त्यसैले यसले छिटै अन्तिम रुप लिन्छ ।’
मन्त्री थापाले ऐनका बारेमा धेरै पटक छलफल भईसकेको र सम्वन्धीत कानून, अर्थ, श्रम लगायतका मन्त्रालयबाट समेत स्विकृति पाइसकेकोले यो विधेयक संसदबाट पारित हुन पनि धेरै समय नलाग्ने बताए ।
‘म मन्त्री भएर आए देखि नै यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको थिएँ । किनभने ऐन नहुँदा कार्यक्रम अघि बढाउन समेत कतिपय ठाँउमा जटिलता थियो । तर अव भने त्यस्तो हुनेछैन । यसले कार्यक्रम विस्तार गर्न सहजता थप्नेछ ।’
बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारी निकाय सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिका निर्देशक डा. गुणराज लोहनीले ऐन आएपछि बीमा कार्यक्रम कानूनी रुपमा समेत बलियो हुने तर्क गरे । ‘कानून आएपछि त काम गर्न स्वतह सजिलो हुने भयो । हामीले लामो समय देखि यसलाई छिटो पारित गर्न लागि रहेका थियौँ ,’ डा लोहनीले भने ।
ऐन आएपछि सरकारले बीमा कार्यक्रम ठूलो समूहबाट सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । पहिलो चरणमा सेना, प्रहरी, बैदेशिक रोजगारमा जाने समूह, शिक्षक तथा अन्य कर्मचारीहरुको समूहलाई बल्कमा लिएर काम गर्ने योजनामा समिति रहेको छ । गरीवी कार्ड तत्काल उपलव्ध गराएर गरीव पहिचान भएकाहरुको प्रिमियम सरकारले तिर्ने योजना समेत छ ।
गतवर्ष २५ चैत बाट सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले ८ जिल्लामा मात्रै लागू छ । यो अवधीसम्म ४५ हजार बढीले बीमा कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् ।
मन्त्रिपरिषदले आज पास गरेको विधियेकको मस्यौदा:
(ख) “कार्यकारी निर्देशक” भन्‍नाले दफा २३ बमोजिमको कार्यकारी निर्देशक सम्झनु पर्छ ।
(छ) “बोर्ड” भन्‍नाले दफा १४ बमोजिमको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सम्झनु पर्छ ।
(ट) “सेवा” भन्‍नाले बीमितले दफा ७ बमोजिम प्राप्त गर्ने सेवा सम्झनु पर्दछ ।
(ठ) “सेवा प्रदायक” भन्‍नाले सेवा उपलब्ध गराउन बोर्डसँग सम्झौता गरेका देहायको कुनै संस्था सम्झनु पर्छ :- ।
(१) यस ऐन बमोजिमको स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत प्रदान गरिने सेवा देहाय बमोजिम हुनेछ :-
८. उपलब्ध नहुने सेवा : यस ऐन बमोजिमको स्वास्थ्य बीमामा देहायको सेवा समावेश हुने छैन :-
१२. भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्था : बोर्डले सेवा प्रदायकवाट प्रदान भएको सेवा वापतको भुक्तानी देहायको आधारमा गर्नेछ :-
१३. सम्झौता अन्त्य गर्नु पर्ने : बोर्डले सेवा प्रदायकसँग दफा १० बमोजिमको गरेको सम्झौता देहायको अवस्थामा अन्त्य गर्नेछ :-
१५. बोर्ड स्वशासित संस्था हुने : (१) बोर्ड एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ ।
२०. अध्यक्ष तथा सदस्य पदको लागि योग्यता : देहायको योग्यता पुगेको कुनै व्यक्ति बोर्डको अध्यक्ष तथा सदस्य हुन सक्नेछ :-
२१. पद रिक्त हुने : (१) देहायको अवस्थामा बोर्डको अध्यक्ष, सदस्य तथा कार्यकारी निर्देशक पद रिक्त भएको मानिनेछ :-
३१. कोषको सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था : कोषको सञ्चालन कार्यकारी निर्देशक र लेखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ ।
(२) सेवा प्रदायकले बीमितलाई सेवा प्रदान नगरेमा, सेवा प्रदान गर्न ढिला सुस्ती गरेमा वा निर्धारित सेवास्तरभन्दा न्यून गुणस्तरको सेवा दिएमा त्यस्तो सेवा प्रदायकलाई बोर्डले पन्ध्रहजार देखि पच्चीस हजारसम्म जरीबाना गरी जरीबाना बराबरको रकम बीमितलाई भराई दिनेछ ।
(३) बीमितले दफा ६ विपरीतको कार्य गरी बोर्डलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याएको पाइएमा कसुरको मात्रा हेरी नोक्सानीको बिगो बिगो बराबरको रकम भराई त्यस्तो विमितलाई जरीबाना गर्न सक्नेछ ।
३५. पुनरावेदन गर्न सक्ने : दफा ३४ बमोजिम बोर्डले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैँतीस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।
औलो प्रभावित क्षेत्रमा दशदिने अभियान